डा दिल्जान मन्सुर (ड कर्ड)/पहिलोपोस्ट
11th February 2018 | २८ माघ २०७४
हो, म एक डाक्टर। डाक्टर हुनु मेरो अपराध थियो? म मेरो बुबालाई सडक छेउको अस्थाइ टहरामुनि छाडेर गोर्खाका भुइँचालो पीडितलाई उद्दार गर्न गएँ। मेरो सपरिवार ममा पूर्ण निर्भर थिए। तैपनि तिनलाई एक्लै छाडेर म हजारौं अन्य बुबाहरुलाई सहयोग गर्न हिँडे जसका छोराहरु म जस्ता डाक्टर थिएनन्।
हो, म डाक्टर हुँ। तर, यो पेशा मलाई एक अपराध जस्तै लाग्न थालेको छ। कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन म कसरी डाक्टर बन्न पुगेँ। अपराधी डाक्टर!
स्कुलमा मेरा साथीहरु खेलिरहँदा म दिनरात लगाएर पढिरहन्थेँ। अन्य साथीहरुले कलेज जीवनमा रमाइलो गरिरहँदा म मेरो अध्ययनमा घोटिइरहन्थेँ। मेरा सहपाठीहरु आनन्दको जिन्दगी बिताइरहँदा र प्रेमिकासँग हाँसखेल गर्दैगर्दा म सप्ताहन्तमा पनि पढाइमा जोतिइ रहन्थेँ। डाक्टर अध्ययनका लागि म योग्य ठहरिन मैले दशौं हजार अन्य विद्यार्थीहरुसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्‍यो।
संसारकै सम्भवत सबैभन्दा कठिन विषयहरुमा ६ वर्ष निरन्तर गहन अध्ययन गरेपछि म डाक्टर बने। म रोगग्रस्त मानिसहरुको पीडामा मलम लगाउँदै हप्तामा ९० घण्टा काम गर्छु। कहिले काहीँ त बिहानै ४ बजे मेरो ड्युटी सुरु हुन्छ जब कि बिरामीका आफन्त मस्त निद्रामा सुतिरहेका हुन्छन्। दसैं, इद, क्रिस्मस जस्ता पर्वहरु होस् या हिउँद के बर्खा? सप्ताहन्तमा पनि म अनिदो बस्दै रोगीहरुको सेवामा खटिरहन्छु।
मेरा परिवारका सदस्य के गरिरहेका हुन्छन् सोन्च्नसमेत फुर्सद हुन्न। मेरा बिमारीहरु वार्ड, इआर र आइसियुमा के गर्दै होलान् भनेर सधैं चिन्तित हुन्छु। तिमी भने सोच्छौ होला म जस्तो तिम्रो छोरो होस्, र तिम्रो छोरीले म जस्तोसँग बिहे गरोस्। तिमीलाई थाहा छ कि छैन? मैले के कति खर्चें? एक डक्टर हुनको लागि। ती परिश्रम र अनिद्राका दिनहरु मात्रै होइनन्, मैले मेरो सम्पूर्ण अमुल्य युवावस्था नै सुम्पेँ यस सेतो कोट पहिरन र स्टेस्थोकोप घाँटीमा भिर्न।
यति गरेर पनि अन्त्यमा मैले के पाएँ त? अपराधी र हत्यारा को बिल्ला! मैले मेरो पेशामा शुद्धिकरणको माग के गरेको थिएँ मलाई अपराधी र हत्यारा भनियो। म अहिले आमसन्चारद्वारा बन्धित र पीडित बनाइएको छु। हो म मान्छु, म अति शिक्षित र सभ्य अपराधी! जसले गैरकानुनी तरिकाले चल्ने राष्ट्रलाई डक्टरी पेशामा सही प्रणालीको ब्यवस्था हुनपर्छ भनेर माग राख्यो। डाक्टरहरु अमर रहुन्।